Best 24 Tiger Tattoos Design Mazano Kwevarume nevakadzi - Tattoos Art Ideas
Best 24 Tiger Tattoos Design Mazano Kwevarume nevakadzi
Iwe hausi kuona nguva dzose vanhu vanoshandisa tiger tattoo design nekuda kwekukosha kukuru kwavanoita kana vachionekwa. Avo vari muAsia vanonzwisisa zvakakwana zvinorehwa nekugadzirwa kweguru pamitumbi yavo.
Tiger Tattoo zvinoreva
Tiger tattoo ndeimwe yevakakurumbira zvikuru pakati peAsia. Zvinorehwa ne #tiger ndizvo zvinoita kuti zvive zvakajeka. Chiratidzo chegurusi ndicho chinoreva nzira iyo munhu anorarama pasina chero kudziviswa. Zvinomirira nyama, utsinye, simba uye simba. Zvinogona kutaurwa kuti masheti ezuva nokuti anotenda kuti anotongwa nemasimba ekudenga.
Vanhu vanoenda kune tiger #tattoo havatongwi nechishuwo nekuda kwekuti vanotenda mumasikirwo. Vavengi vanoita iyi tattoo kuti varatidze kuti vane simba sei. Iyo tiger inotendwa kuti ndiyo vadziviriri veavo vakafa. Ichi ndicho chikonzero ivo vanowanzoonekwa pamakuva kana pamakuva.
Tiger tattoo inogona kuonekwa munzvimbo dzakasiyana dzenyika uye dzinomiririra zvinhu zvakawanda zvakare. Kusiyana kwezvivara izvi ndiko kunoita kuti zvive zvinoshamisa. Zvinomiririra Brute Strength, Simba, Dominance, Kodzero neZvibvumirano, Njodzi nekuparadza, Simba, Kudzivirirwa uye Kuvimbika, Kushushikana uye Kuita zvepabonde. Ichi ndicho chikonzero nei vanhu vazhinji vari kushandisa iko. Runako rwakanamatirwa nekodha yemagera ndiyo inoita kuti ive inofadza yevarume nevakadzi.
Vazhinji vedu tinowanzobatanidza Tiger tattoo nevanhu veAsia. Izvi ndezvokuti Tiger inowanzozivikanwa pakati peAsia. Hondo yeAsia inonzi inozivikanwa sechisikwa chezvinyorwa chinoonekwa sechirairo mazuva ano.
Ipa Tiger Tattoo
Chiratidzo chinokodzera zvakakwana pamativi akasiyana emuviri. Kunyange zvakakwana zvisingagoni kuregererwa kana zvasvika pakuve nemamwe emifananidzo yakaisvonaka.
Majeko anogona kurondedzerwa semapiro kana wingless. Pane zvinhu zvakawanda zvinogona kuwirirana neye tiger sematenga, makore kana gungwa. Paunenge uri kumavirazuva, vamwe vanhu vanogona kufunga nezvaro sezvisikwa zvine ngozi.
Mifananidzo yakaisvonaka Inonzi Tattoo
Zvisinei, Tigers vanozivikanwa kuti vanomiririra hupfumi, hupfumi, simba, mutsa, rusununguko uye simba.
Simba Tigir Tattoo
Nhasi, unogona kushandisa tattoo uye kumira pachena. Pane zvikonzero zvakawanda nei vanhu vachienda kune iyi tattoo inokosha. Iwe haufaniri kudiwa unobva kuAsia kana China usati wanyora iyi chinyorwa chakanaka.
Akanaka Tiger Tattoo
Zvamunoda ndeye muimbi akanaka anogona kukubatsira kuti uwane vamwe veTigers vakanaka pane chero chikamu chemuviri wenyu.
Nhasi mazuva ano vatambi vemazuva ano vari kutora tattoo yeTiger kune imwe nzvimbo. Izvo hazvina basa nemhando ye #design yaunoda, ivo vakagadzirira kukupa iyo yekutora inoshamisa yausingagoni kurwisa.
Nyore Tiger Tattoo
Tiger zvipenyu zvakanaka zvinofadza mwoyo wedu patinozviona. Tingave tisina mukana wekuona idzi Tigers perch pamuviri wedu asi isu tine ropafadzo yekuvaisa iyo yakaiswa patiri.
The Tiger tattoo yakave yakakurumbira yeTiger tattoo iyo munhu wese anogona kushandisa. Tiger imwe neimwe ine kukosha kwayo iyo ndiyo chikonzero nei tichifanira kungwarira rudzi rweTiger tattoo yatinozoshandisa.
Mukadzi wechidiki Tiger Tattoo
Zvakakosha kuti iwe unzwisise kuti Tiger tattoo design yakave yakakosha. Iwe unofanirwa kutora nguva yedu mukutsvaga kuburikidza nekambani yekuInternet yeTigers usati wasarudza chisarudzo chako. Nguva yokutanga yaunofanirwa kuita ndeyokunyora mucherechedzo uyo achakuudza zvazviri.
Gumbo Tigure Tattoo
Rudzi rwechirudzi tiger tattoo kugadzirwa ndiro chiratidzo chine simba chinoremekedzwa kumativi ose eAsia uye chinofungidzirwa kuti chakabatanidzwa nehutano, chido, furo, simba, hasha uye utsinye. image source
MuKorea, vanhu vanotenda kuti tigers ndiyo maziso avanoona uye muIndia, iyo tiger iri kuona kuratidza Mwari mukuru, Shiva kana kunyange Muparadzi uyo anoonekwa achishandisa ganda rechiganda sezvipfeko zvaro kana kuti akatasva. image source
Izvi zvinoratidza kukudzwa munyika yose. Zvisinei, kune dzimwe nguva iyo tiger inobatanidzwa nerufu, zvakaipa nezvoupenyu. image source
Iwe haungamboregi kuda rudo nekugadzirisa uye chikamu chemuviri chave chashandiswa pane. Unogona kuinyorera pane chikamu chero chipi zvacho chemuviri wako pamwe chete nemuvara wose weunosarudza. Kune vakadzi vanogona kushandiswa kutaura pamusoro pehupombwe hwavo. image source
Icho hachina kunyanya chikamu chemuviri apo tiger haina kutarisa zvakanaka. Tarisa pane zvakasikwa pamuviri. Inotaridzika seyakanaka iyo ndiyo chikonzero nei vazhinji vevakadzi kana kunyange varume vachigona kuishandisa. image source
Ikoko hakuna chikamu chemuviri umo mavara ekugadzira tattoo haatarisi zvakanaka. Icho chakakwana pane ruoko, gumbo, kumashure kana chero chikamu chaunosarudza sechigadzirwa ichi. image source
Zvitadzo zvakadai sezvakanaka chaizvo kuti zvione iyo ndiyo chikonzero nei iwe uchigona kushandisa nayo chero chikamu chemuviri wako. Ichi ndicho chikonzero nei uchigona kuenda nayo. image source
Muvara unogona kuchinjwa maererano nenzira yaunoda nayo. Pane chinhu chausingave wakakwanisa kuumba zvakapoteredza kana mukutora mifananidzo yako. image source
Iwe unofarira urongwa urwu here? Chii chinokuudza iwe paunotarisa pakutanga? image source
Hazvisi zvakaoma kuita kuti tattoo iyi iwedzere kufadza kana zvasvika pakuratidza kushamisa uye kunakidza zvigadziro nemutambo uyu. Hapana mugumo kune zvaunogona kuita nekutora mifananidzo yako image source
Chero chikamu chemuviri waunosarudza kushandisa; iyo icharamba ichikurumbidza iwe. image source
watercolor tattoosleeve tattooszuva tattooseagle tattoosarrow tattoodiamond tattoomehndi designhanzvadzi tattoosAnkle Tattoostattoo yezisochifuva tattoostattoo ideasscorpion tattoocompass tattoobutterfly tattoostribal tattoosoctopus tattookorona tattoosarm tattoosshumba tattoofoot tattoosbirds tattoostattoos kuvanhuangel tattooselephant tattoomimhanzi tattoosGeometric Tattooscute tattoosflower tattoosneck tattooscat tattoosshamwari yakanakisisa tattoosHeart Tattoosback tattooslotus flower tattooinfinity tattoorose tattoosrudo tattooscross tattooskoi fish tattootattoos for girlszodiac zviratidzo zviratidzorip tattooshenna tattoomaoko tattooscouple tattooscherry blossom tattooAnchor tattoosmwedzi tattoosFeather Tattoo